Ganacsiga Magaalada Boosaaso oo xiran maalintii 5aad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ganacsiga Magaalada Boosaaso oo xiran maalintii 5aad
Ganacsiga Magaalada Boosaaso oo xiran maalintii 5aad
Waxaa albaabada loo laabay ganacsiga magaalada Boosaaso, waxaana maalintii shanaad xiran dekeda weyn ee magaalada kadib markii ganacsatadu ka hortimid go’aankii Puntland ku joojisay in Shilin Soomaali lagu qaado canshuurta kastamka dekedda Boosaaso.
Banaanbaxyo looga soo horjeedo go’aankan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada Boosaaso iyo qaar kamid ah magaalooyinka kale ee Puntland. arrintan ayaa saamayn ku yeelatay guud ahaan dhaqdhaqaaqii ganacsiga Puntland.
Ma jirto cid wali ka hadashay arrintan oo isaga wada timid kuwaas oo ka socda Maamulka iyo ganacsatada, lamana oga cawaaqib xumada ay sababi karto haddii ay sii socoto.
Puntland ayaa axadii 06/Dec/2020 waxay shaacisay in sarrifka halkii doollar lagu jaan-gooyay 35,000 oo shilin Soomaali ah si loo xakameeyo sicir-bararka, balse go’aankan ayaan wali ka dhaqangelin magaalada Boosaaso.
Xiisada ka dhalatay diidmada Shilinka Somaliga & Saameynta uu dhaliyay ayaa wali ka taagan deegaano badan oo ka tirsan Gobolada Puntland.
Previous articleMaxkamadda Sare Puntland oo mudeysay dhageysiga kiiska Xildhibaanadii Xasaanada laga qaaday
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo Wasiir ka tirsan Dowladda UK kula kulmay Muqdisho